Ku Celis: Xaqiiqooyin u gaar ah filimka Akshay iyo Suniel marwalbo lagu xasuusan doono Mohra – Filimside.net
Ku Celis: Xaqiiqooyin u gaar ah filimka Akshay iyo Suniel marwalbo lagu xasuusan doono Mohra
July 1, 2018 Zakarie Abdi
Mohra waa filim Blockbuster ah kaasi oo noqday filimkii labaad ee sanadii 1994 ugu weynaa waana filim hirgalay oo ilaa maantadan la joogo laga xiisa dhigeyn daawashadiisa.
Mohra oo ka mid ah aflaantii ugu caansanaa oo ay Bollywood-ka sameeyeen waxaa magac iyo maqaam ku yeesheen filimkaan guusha taariikhiga ah ee uu gaaray Akshay Kumar iyo Suniel Shetty oo marar kala duwan shaashada kasoo wada muuqdeen.
Fadlan filimka Mohra xaqiiqooyin u gaar ah hoos kaga bogo adigaaba ka heli doontid:
Jilaayaasha: waxaa hogaamiyaal ka ahaayeen Akshay Kumar, Suniel Shetty, Raveena Tandon iyo Naseeruddin Shah halka ay door caawiye ah ku lahaayeen Paresh Rawal, Gulshan Grover, Raza Murad iyo Sadashiv Amrapurkar.
Xaqiiqada 1-aad: Mohra waa filimkii ugu horeeyay oo ay kasoo wada muuqdeen sedexda guusha u saaxiibka ah marka ay shaashada soo wada galaan Akshay Kumar, Sunil Shetty iyo Paresh Rawal.
Xaqiiqada 2-aad: Divya Bharti ayaa mudo 5-maalmood ah filimkaan duubtay balse marka ay geeriyootay waxaa lagu badalay Raveena Tandon oo markii hore cabsi ka muujisay booskeeda inuu liidan karo madaama atoorayaal awood badan la isugu keenay.
Xaqiiqada 3-aad: Aishwarya Rai ayaa iska diiday sameynta Mohra madaama ay ku mashquulsaneyd isku diyaarinta tartanka quruxda aduunka waxaana lagu badalay Raveena Tandon.
Xaqiiqada 4-aad: Sridevi ayaa dooqa kowaad ahayd balse Mohra waxay ka dooratay filimkii ganacsi ahaan bur buray Chandramukhi waxaana lagu badalay Divya Bharti oo filimkaan calfan weesay madaama 5-maalmood kaliya duubista ka qayb qaadatay ka hor inta aysan geeriyoonin.
Xaqiiqada 5-aad: Gulshan Rai oo maal galiyay Mohra iyo Shabbir Boxwala oo sheekada wax ka qoray waxay inta badan booqan jireen qol Gym-ka lagu cayaaro oo Suniel iska lahaa meeshaas ayay isku barteen kadib Shabbir Boxwala waxaa kusoo dhacday sheeko Action iyo qayaano ah inuu qoro kadibna Gulshan Rai ayuu fikirkaas la wadaagay halkaasna ayay ka bilaabatay hirgalinta Mohra.
Xaqiiqada 6-aad: Director Rajiv Rai ayaa Akshay Kumar la kulmay asigoo filimka Waqt Hamara Hai (1993) duubayo wuxuuna u baahnaa atoore dheer oo Dance-ga iyo Action-ka ku wacan labadaas xirfadna Akki ayaa isku lahaa oo aqbalay sameynta Mohra, weliba Director Rajiv Rai horeyna wuxuu u daawaday Akki filimkiisii kowaad Saugandh (1991).
Xaqiiqada 7-aad: Inta badan muusiga filimka Mohra ee gadaal ka yeereyso (background score) waxaa laga soo Copy gareeyay muusigada filimka Hollywood-ka ah Terminator 2: Judgement Day.
Xaqiiqada 8-aad: Mohra inta badan sheekadiisa si aan rasmi ahayn waxaa looga soo min guuriyay filimka Hollywood-ka ah Death Wish 4 :the crackdown (1987).
Xaqiiqada 9-aad: Dhamaadka filimkaan ama uultimada marka Naseeruddin Shah uu ka dalbanaayo Akshay inuu jilbaha dhulka dhigto kadibna is dharbaaxo, waxaa laga soo Copy gareeyay filimka Hong Kong sameeyay ee lagu magacaabo Hard Boiled.
Xaqiiqada 10-aad: Muuqaal ahaan goobta Suniel Shetty kaga aar gudanaayo ragga xaaskiisa dhimashadeedii ka dambeeyeen waxaa laga soo min guuriyay ama looga dayday filimka Hollywood-ka ah Sudden Impact.
Xaqiiqada 11-aad: Mohra wuxuu u tartamay 9-abaal marin oo kala duwan dhanka shirkada Filmfare Awards balse waxba laguma qaadin, biladaha uu u tartamay filimkaan sanadii 1995 waxaa ka mid ah: Best Film, Best Director, Best Comedy (Paresh Rawal), Best Villain (Naseeruddin Shah), Best Music, Best Lyrics, Best Singer Male (Udit Narayan for Tu Cheez Badi Hai), Best Singer Female (Kavita Krishnamurthy for Tu Cheez Badi Hai), Best Choreography.
Xaqiiqada 12-: Album-ka heesaha Mohra wuxuu noqday midka labaad ee ugu iibsashada badnaa sanadii 1994 ilaa haatana wuxuu ka tagay filimkaan heeso dhaxal gal noqdeen gaar ahaan heesta Tu Cheez Badi Hai Mast Mast, ip Tip Barsa Paani iyo kuwo kale.
Xaqiiqada 13-aad: Raveena Tandon magaca “Mast Mast Girl” waxay ka dhaxashay heeska Tu Cheez Badi Hai Mast Mast iyo sida ay caan u noqotay waxaana lagu tilmaamay heestii ugu caansaneyd ee 90-maadkii Bollywood-ka sameeyeen.
Waxaa Aqrisay 2,242